(अम्बर गुरूङ बाट पठाईएको)
तीन छोरा : किशोर, राजु तथा शरदमणि र एक छोरी अलकाका पिता गुरुङ हुन्। ०५२ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगीत निर्देशकसमेत रहेका गुरुङ काठमाडौंको महाराजगञ्ज चक्रपथ नजिकै बसोबास गरे।
वि.सं. २०२६ मा संगीत विशेषज्ञका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रवेश भए। संगीत प्रमुख, संगीतसंयोजक र संगीत निर्देशक भएर वि.सं. २०५४मा अवकाश पाए। उनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको गीतिनाटक कुन्जिनी, मुनामदनमा सँगीतांकन गरेका छन्। उनले सत्यमोहन जोशीका चार नाटकलगायत माधवप्रसाद घिमिरेको मालती मंगलेमा समेत संगीत दिएका छन्। उनले चलचित्र मनको बाँध, जीवनरेखामा पृष्ठसंगीत र पार्श्व संगीत दिएका छन्। त्यस्तै आदिकवि भानुभक्त वृतचित्र वृतचित्रमा पार्श्वसंगीत,स्वर दिएका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अम्बर_गुरुङ&oldid=725581" बाट अनुप्रेषित